Tekinika matihanina amin'ny Photoshop Blur | Famoronana an-tserasera
Teknika manjavozavo matihanina miaraka amin'ny Photoshop para conseguir manasongadina zavatra amin'ny sary iray amin'ny fizotry ny fanitsiana amin'ny alàlan'ny fandaharana famerenana sary an-tsary ny fahatsarany. Miezaha miasa Photoshop a fomba marina sy matihanina mitantana ny fanatsarana ny valin'ny sarinao.
El manjavozavo Photoshop Azo ampiasaina amin'ny zavatra maro izy io: mamorona fomba fijery, teboka manjavona, misarika ny sain'ny singa iray, manafina ny ampahany amin'ny sary, ary ny karazana retouching rehetra izay mamela antsika hahatratra ny sasany sary matihanina sy manintona kokoa. Mianara bebe kokoa momba ny famerenana sary miaraka amin'ity sary ity lahatsoratra tena ilaina.
Ny blur dia singa fototra raha tiantsika mahazo lalina amin'ny sary ary manome a zava-dehibe amin'ireo singa mifantoka, noho io manjavozavo io ny masontsika dia mampitodika ny masony any amin'ny faritra sasany amin'ilay sary, ka mahatratra a famakiana hafa ny sary.
Azontsika atao ny mampiasa blur to manome lanja ny ampahany manokana ary tena marina amin'ny sary toy ny asongadino ny fijery, voninkazo sy singa rehetra izay raha ny fijerinay dia misy lanjany lehibe kokoa amin'ny famoronana. Azonao atao koa ny mampiasa blur to afeno ny mombamomba ny olona irayIty dia zavatra tena ampiasain'ny ray aman-dreny amin'ny tambajotra sosialy izay mampakatra sary ny zanany kely. Raha te hianatra teknika mahaliana vitsivitsy ianao, vakio hatrany ity lahatsoratra.
Hianarantsika izany ny manaraka ao amin'ny Photoshop:
aplicar manjavozavo ankapobeny amin'ny sary
Fahazavana mazava amin'ny faritra iray
Conseguir lalina mampiasa blur
Afeno ny maha-izy anao ny zaza mampiasa blur
1 Blur fototra ankapobeny
2 Famoahana manokana hanasongadinana zavatra iray
3 Averinay ny sosona lehibe
4 Mametaka fofona gaussianina amin'ny sosona avo roa heny izahay
5 Mamorona sarontava sarimihetsika
6 Makà halalà amin'ny alàlan'ny blur
7 Afeno amin'ny zaza ny mombamomba ny zaza
Blur fototra ankapobeny
Ny blur voalohany izay tsy maintsy fehezintsika dia ny fototra ankapobeny izay hamafana ny sary iray manontolo izahay tsy manasarotra loatra ny fiainantsika. Amin'ny fotoana maro dia liana amin'ny famoronana blur ankapobeny izahay hanala ny laza amam-pahalalana amin'ny sary, dia mety tena ilaina amin'ny famoronana ambadika sary.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia sokafy ny sary eto Photoshop.
Raha vantany vao misokatra ny sary dia tsy maintsy mandeha any amin'ny menio ambony isika ary mitady ilay safidy Sivana gaosy / blur / blur, ny fanindriana ity takelaka ity dia hanokatra varavarankely vaovao ahafahantsika misafidy ny ambaratonga manjavozavo te hampihatra amin'ny sary izahay.
Famoahana manokana hanasongadinana zavatra iray
Raha mila asongadino ny ampahany manokana amin'ny sary azontsika atao koa ny mampiasa azy gaussian blur fa manaraka dingana hafa.
Averinay ny sosona fototra
Mampihatra izahay a gaussian blur amin'ny sosona duplicate
Napetrakay ny sosona tsy mifantoka ambanin'ilay sosona mifantoka
Mampihatra izahay a saron-tava vector amin'ny sosona mifantoka
La sosona mifantoka mandeha ambonin'ilay sosona tsy mifantoka
Ireto no dingana izay harahintsika amin'ity karazan-tsolika ity, na dia toa korontana aza dia mora tokoa ny fanatanterahana azy. Andao hojerentsika tsara kokoa tsikelikely izany.
Averinay ny sosona lehibe
Manokatra ny sarinay izahay amin'ny Photoshop ary averinay io, aorian'ny fanaovana an'io dia ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia manova anarana amin'ny sosona ho an'ny miasa amin'ny fomba milamina kokoa, amin'ity tranga ity dia homentsika anarana ireto sosona ireto toy izao: sosona mifantoka, sosona tsy mifantoka. Tokony ho azo antoka fa ny sosona tsy mifantoka dia eo ambanin'ny sosona mifantoka.
Mametaka fofona gaussianina amin'ny sosona avo roa heny izahay
Misafidy ny sosona duplicate voalaza isika "Layer tsy misy ifantohana" ary mampihatra izahay a Gaussian blur. Raha hampihatra ilay blur dia miverina amin'ny varavarankely ambony an'ny Photoshop.
Ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia mamorona sarontava sarimihetsika amin'ny sosona mifantoka (sosona ambony) amin'ity fomba ity dia hofafantsika ny ampahany amin'ity fakana ity avelao hita ny sosona ambany (tsy mifantoka) azonao a voan'ny blur any amin'ireo faritra nofafantsika ihany. Fomba mora apetraka ity mazava kokoa blur.
Mamorona sarontava sarimihetsika
Hamorona a saron-tava vector ny sisa ataontsika dia safidio ny sosona mifantoka ary tsindrio ny kisary eo ambanin'ny sosona.
Mora ihany ny fizotrany, ny sisa tsy maintsy ataontsika dia ny milalaova amin'ny sanda borosy, ny mahazatra indrindra ary atoro anao dia ny mametraka ny soatoavina somary ambany ka ny vokany dia misoko mangina kokoa ary afaka miasa ny vokany tsikelikely.
Afaka mamorona a vokany mahaliana raha toa ka tsy mampiasa ilay borosy hamafana ny ampahany amin'ilay sary dia a grady radia. Ny fizotry ny asa dia mitovy, ny hany zavatra miova dia ny fampiasana ilay fitaovana gradient araka ny hitantsika eo amin'ny sary.
Makà halalà amin'ny alàlan'ny blur
Raha te hahazo isika halalin'ny saha mampiasa gradient ny tokony hataontsika dia ny mampihatra a blur amin'ny iray amin'ireo sosona sy sarontava sarimihetsika, dia io dingana io ihany izay efa nataontsika taloha teo amin'ireo sary hafa. Ny hany zavatra vaovao tokony hataontsika amin'ity ampahany ity dia ny famoronana a tsipika gradient amin'ny fomba iray izay ahazoan'ny blur gradiante mandroso.
Afeno amin'ny zaza ny mombamomba ny zaza
Androany dia normal be sivana ny sarin-jaza alohan'ny hampakaranao azy ireo amin'ny tambajotra, na Ho fiarovana na inona na inona antony hafa dia mahaliana ny mahafantatra ireo karazana effets ireo izay afaka manampy antsika amin'ny fotoana sasany.
Tsotra be ny fizotrany, ny sisa tsy maintsy ataontsika manaova sosona lehibe ary safidio ny fitaovana marquee elliptical de Photoshop. Rehefa manana ny fizarana fitaovana isika dia hamorona boribory eo amin'ny tarehin-jaza mba hametahana a gaussian blur amin'ny fomba hitantsika teo ihany lahatsoratra.
Fidio fitaovana endriny elliptika
Create a fifantenana avy amin'ny tarehin'ilay zaza
aplicar gaussian blur
Asa manjavozavo Photohop zavatra mora sy haingana dia haingana izany, ny tokony hataontsika dia ny mianatra mahafehy ny fitaovana maro nomen'ny programa, amin'ity tranga ity dia iray ihany no nampiasainay fa mianatra hahay foto-kevitra sy fomba fiasa fototra sy ilaina ho an'ny Famerenana sary.
El fika retouching sary amin'ny Photoshop Tsy mahay manao zavatra fa atambatra izay fantatsika amin'ny fomba ahafahantsika mamorona zava-baovao. Aza misalasala mikaroka ny programa aorian'ny fahalalana zava-baovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Teknika manjavozavo matihanina amin'ny Photoshop
Teknika tena tsara ... hampihatra ny sasany